tuubooyin bir dibadda & gudaha mashiinka shot derbi-engeeg - Shiinaha Qingdao Antai culus Industry
mashiinka-engeeg Steel biibiile shot waxaa si balaadhan looga isticmaalaa gridding biraha, tube steel, batroolka, kiimikada, warshadaha korontada, birta, magaalada kuleylka dhexe, dheecaan dhexe iwm Waxaa haboon nadiifinta dusha / hoose dibadda ee tuubooyinka steel waa, ka saar oo dulmiga iyo huubadiisa Weld, samaysaa tuso midabka biraha, kordhin dusha ratio iyo Weld huubadiisa, samaysaa tuso midabka biraha, ay kordhiso bedka ratio, oo sidaas ay gacan rinjiyeynta iyo daahan.
Tuuboyinka Steel / tube gudaha dibadda / Wall toogtay Machine-engeeg
mashiinka-engeeg Steel biibiile shot waxaa si balaadhan looga isticmaalaa gridding biraha, tube steel, batroolka, kiimikada, warshadaha korontada, birta, magaalada kuleylka dhexe, dheecaan dhexe.
biibiile The steel ujeedada gaarka ah derbigii dibadda / hoose lagu toogtay mashiinka-engeeg ku haboon yahay nadiifinta dusha / hoose dibadda ee tuubooyinka steel, ka saar miisaanka iyo huubadiisa Weld, samaysaa tuso midabka biraha, kordhin dusha ratio iyo Weld huubadiisa, samaysaa tuso midabka biraha , kordhiyo bedka ratio, oo sidaas ay gacan rinjiyeynta iyo daahan.
The Steel Shot tuuboyinka Machine-engeeg isticmaalaa qaraxa-xawaaraha sare inay laayaan oo gooyay dusha sare ee gabal shaqada warbaahinta qalalan iyo non-dheecaanka, oo ay ogaadaan ujeedada nadiifinta.
Steel tuuboyinka derbiga awgiis toogtay engeeg mashiinka
Mashiinka dibadda / dibadda shot biibiile engeeg kartaa saarista qiyaasta xabagta ah, miridhku iyo sundries kale ka biibiile dibadda iyo gudaha si ay u leeyihiin saamayn wanaagsan oo derusting, gaadho heerka qaran ee SA2-SA3 ee SR / TQ414-98. Waxay horumarin kartaa siligga iyo iska caabin compresive dusha biibiile oo hantiyaan karo si qoto dheer ah lagu kalsoonaan karo oo ah hannaanka abrasion, si aad u hesho Amda xoogan oo daahan ee beebka natiijo dheregto anticorrosion iyo ningax therrmal. Dhanka kale, xawaaraha derusting ah waxbaa laga beddeli karaa sida 1-6m / min sida noocyada kala duwan.
Steel tuuboyinka Inner derbiga nadiifinta Sand engeeg mashiinka
mashiinka Tani waxay ansixiyeen Haydarooliga, madaxa impeller korontada ama qoriga goobtii-engeeg cadaadiska hawada si loo baabi'iyo miridhku, daahan xabagta, slag alxanka, waayo, tuubooyinka gudaha si ay u sameeyaan dusha sare ka muuqan isdiyaarintiisana macdan ah, kordhinta bedka ah. Oolnimada derusting waa 80-150㎡ / h iyo heerka preparetion dusha sare gaadho 2.5-3. Sida laga soo xigtay dhexroor kala duwan, qalabka derusting for tuubooyinka gudaha la equiped karaa hal qori, double-qori, afar qori, lix-qori iyo haanta ciid sideed-qori. Loo isticmaalo kala duwan oo dhexroorka: φ48-φ1000.
Mashiinka Steel tuuboyinka Inner Sandblasting ka kooban Mashiinka biibiile-qoqobada, tarooli goobtii-engeeg, madaxa goobtii-engeeg, mashiinka goobtii-graying, line goobtii-warshadaynta, gaariga oo khaas ah, waayo, daahan gudaha, sanduuqa goobtii-ururinta, SEPARATOR goobtii, nidaamka Carro-ka saareen iyo madal hawlgalka, iyadoo noocyo badan in la doorto.
Halbeegga Size Nadiifinta (mm) Nadiifinta Speed ​​(m / min) function
QGW100 50-300 2-10 Dibadda Wall of toogtay Machine-engeeg
QGN100 50-300 1-4 Inner Wall of toogtay Machine-engeeg
1. Codsiga Wide, Easy si loo soo dajiyo iyo sida loo isticmaalo.
2. Customized, Buuxin baahidaada.
3. xasiloonida Good, heerka Low failure (maturity farsamo, roobab farsamo, shaqaale xirfad leh).
4. muuqaalka fiican (farsamada baaluq).
5. warshadaha waaweyn, gaarsiinta degdeg ah.
6. waaxda kormeerka tayada darantahay.
7. Factory iibinta toos ah la leh qiimaha tartan rasmi ah.
shot 8. In ka badan 28 sano oo waayo-aragnimo-engeeg mashiinka design.
9. kooxda design Professional in aad u adeegtaan.
10. nidaamka gacanta Inta badan korantada brand adoptsinternational.
11. CE, ISO9001, shahaado ISO14000 idiin xaqiijin our tayo leh.
12. mashiinka quudinta ee line this leeyahay noocyo badan. line Tani waa ku haboon tuubooyinka la tiro balaadhan oo ah mm size.fromФ48 in Ф1000mm (colnimada Nabiga). ka Ф500 mm si Ф2500mm (Iska Fududeeyaan).
13. line oo dhan helo buuq yar yahay iyo shaqaalaha qalabka Carro-ururinta tamarta fiican leh, kulan looga baahan yahay dawladda ee ilaalinta deegaanka.
14. Waxaa haboon si ay u siiyaan ciid iyo hal mar ciid ku daray waxaa loo isticmaali karaa mar keliya.
15. rakibo Simple, fududahay gaadiidka iyo dayactirka ku haboon.
16. Easy in ay ku shaqeeyaan oo fudud si ay u bartaan, si toos ah si loo xakameeyo oo lagu kalsoonaan karo si ay u qabtaan.
Next: nooca jillaab toogtay engeeg mashiinka
Shot Billet Machine-engeeg
Gariiradda & Wire toogtay Machine-engeeg
Feed Continous O-Ring Shot Rail Dusha Machine-engeeg
Sii Shot Monorail Machine-engeeg
Shot dhululubada ah engeeg Machines
Nooca Hook Door toogtay engeeg Machine
Shot Nooca Suro engeeg Machine la siiyaa Hook Or tiiri
Shot Table Multi Machine-engeeg
Shot tuuboyinka Machine-engeeg
Shot Plate engeeg Machine
Rallway Shot-engeeg Qalabka
Nooca Conveyor rullaluistemadka toogtay engeeg Machine
isaguu ku toogtay Machine Qaylo
Nooca rullaluistemadka Shot Machine-engeeg
Shot Rotary Machine Qarax
Rotary Machine Shot Table-engeeg
Shaxda Rotary Nooca Shot-engeeg Machine
Nooca Rotary Machine Qarax Shot
Toogteen engeeg Waayo ridaya Aluminum
Toogteen Machine-engeeg Waayo Sector Farsamada
Toogteen Machine-engeeg Iyadoo Conveyor rullaluistemadka
Spinner Suro Nooca Shot Machine-engeeg
Steel Rebar toogtay engeeg Machine
Marinka Shot-engeeg Machine
Shaxda Swing shot-engeeg Machine
Tarooli Rotary toogtay Machine-engeeg
Ujawaab Machine Qarax toogtay
Ujawaab Nooca Shot Machine-engeeg
Wire mesh Belt toogtay engeeg Machine
Wire Rod toogtay Machine-engeeg